ဘာသာရေး နှင့် အာဏာရှင်စနစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Science & Religion » ဘာသာရေး နှင့် အာဏာရှင်စနစ်
ဘာသာရေး နှင့် အာဏာရှင်စနစ်
Posted by ၀င့်ပြုံးမြင့် on Jun 24, 2016 in Science & Religion | 44 comments
အောက်ပါ စာသားကတော့ အရီးလတ် ပြောထားတာပါ။ ဟိုဘက်ပို့စ်မှာ ကွန်မင့်တအားများနေလို့။ ဒီဘက်ကို ပြန်ဆွဲလာတာပါ။
အရီးလတ် says; “အာဏာရှင် ဘယ်က ဖြစ်လဲ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့။
ကျွန်မ က စမယ် ရှင်။
သူကြီးမင်း အလှည့်ကျရင် ကျွန်မ ကို သူကြီးပြောတဲ့ “မြန်မာထေရာဝါဒကတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်တိုင်ခံစား..လေ့လာဖူးလို့.. တပ်အပ်ပြောနိုင်တယ်..။” ဆိုတာ ကို အချက်အလက် လေး နဲ့ ရှင်းပြ ပေးပါ။
ကျွန်မ က အာဏာရှင်ဟာ လူ့မျိုးဗီဇ တွေရဲ့ အစပျိုး ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား တွေ က ဖြစ်တာပါလို့ ဆိုမယ်။
သိပ္ပံနဲ့စိတ် ပညာရှင်တစ်ချို့ သုတေသန လုပ်ထား တဲ့ အကြောင်းတွေ နဲ့ ပြောမယ်။
အာဏာရှင်တွေရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာ၊ အပြုအမူ အကျင့်စရိုက် တွေ ကို သူတို့ ရဲ့ ဦးဏှောက် က ထိန်းချုပ် ပုံကို သိပ္ပံနည်းပညာ ရှုဒေါင့်က ကြည့်ပြောတာ တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ဒီလို ဦးဏှောက် ပိုင်ရှင်တွေ ဆိုတာ နေရာတိုင်း ရှိနေတာပါ။
သူတို့ မျိုးဗီဇ နဲ့ သူတို့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ပုံစံ တွေ ကနေပြီး အာဏာရှင်ဖြစ်လာပါတယ်။
သူတို့ အတွက် အခွင့်အရေး ရလိုက်တာ နဲ့ သူတို့ ရဲ့ ဗီဇပါဝါကို အသုံးချလိုက်ကြတာမို့ အာဏာရှင်စနစ် ထွန်းကားပါတယ်။
ဒါကြောင့် အာဏာရှင်တွေ ဟာ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့စည်း နောက်ခံ ရှိတဲ့ နေရာ မှာ အများစု ပေါ်ထွက်လာတာပါ။
ဒါကြောင့်လဲ စစ်တပ် ဆိုတာ အာဏာရှင်က ဦးဆောင်လိုက်နိုင်ချိန် လူကြမ်းဘဝ ကို ရောက်ရှာကြရတော့တာပေါ့။
ဒါကြောင့် ဘာသာရေး အဆုံးအမ က နေ အာဏာရှင်ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကို လုံးဝ ကို လက်ခံလို့ မရတာပါ။
(ပိုဆိုးတာ က သူကြီးမင်း ရဲ့ စွဲချက် “ထေရဝါဒ” က ဆိုတာဘဲ။ ကမ္ဘာ့ကျော် အာဏာရှင်တိုင်း ထေရဝါဒီ တွေ များ ဖြစ်နေရော့လေသလား ရှင်။)
ဒီတော့ အာဏာရှင် မျိုးဗီဇ ရှိသူတွေဟာ ….
ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် တွေ ထဲ မှာလဲ ရှိမှာပါ။
ကျောင်းဆရာ တွေထဲ မှာလဲ ရှိမှာပါ။
ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ လယ်သမာ၊ အနုပညာရှင်၊ နိုင်ငံရေးသမား တွေထဲ မှာလဲ အာဏာရှင်မျိုးဗီဇ ပါသူတွေ ရှိမှာဘဲ။
ဟောဒီ က ကျွန်မ တို့ ရဲ့ ချစ်သော ရွာထဲ မှာ လဲ ရှိနိုင်သပေါ့။ မြင်ကြည့်လေ။
အဲဒီအကြောင်းမျိုး ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် က ဒီမှာ ဖတ်ပါ။
အဲဒီအကြောင်းမျိုး ဖိုရမ် တစ်ခု ကို အသေးစိတ် နားထောင်ချင်ရင် ဒီ မှာ နားထောင်ပါ။
အာဏာရှင်တွေ၊ လူသတ်သမားတွေ ရဲ့ အပြုအမူ တွေ ကို သူတို့ ရဲ့ ဦးဏှောက် ကနေ ဦးဆောင်မှုပြုတာတွေအကြောင်း ရှင်းပြထားတာပါ။
အဲဒီ ဖိုရမ်ထဲ မှာ ဦးနေဝင်း ပုံတောင် ပါပါတယ်။
ကျွန်မ လက်လွတ်စပယ် မငြင်းပါဘူး။ အချက်အလက် နဲ့ လက်ခံနိုင်တာ ကို ပြောပါတယ်။
အာဏာရှင်များ က သာ သူတို့ ပါဝါမြဲစေရအောင် လက်နက် အင်အားအဖြစ် သုံးဖို့ ဘာသာရေး ကို အကြောက်တရား၊ အမုန်းတရား တွေနဲ့ လွှမ်းထားပြီး အစွန်းရောက် အောင် လုပ်ထားတာပါ။
အာဏာရှင် ဆိုတာ တရားနာရုံ နဲ့ အလွယ်လေး ဖြစ်နိုင်ရိုး လား သူကြီးမင်းရယ်။
မျှစ်ကြော် ယူဆချက်က အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာရေးက အာဏာရှင်ကို မွေးထုတ်ပေးတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။
ဘာသာရေးက အာဏာရှင်စနစ်ကို မွေးထုတ်ပေးတယ်လို့ ယုံပါတယ်။
အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်လာတာဟာ အာဏာရှင်ကြောင့်လို့ တစ်ဖက်သတ် ပြောလို့မရဘဲ လုပ်တဲ့လူရော ခံတဲ့လူရော နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မှာ တာဝန်ရှိတာပါ။ လူတွေကို ဘာသာရေးနဲ့ သေ၀ပ်လိမ္မာအောင် လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင် (ရှိတာလေးနဲ့ ရောင့်ရဲတတ်တာမျိုးကအစ) အာဏာရှင်ဟာ အာဏာနဲ့ အုပ်ချုပ်လို့ ရသွားပါပြီ။
ဘာသာရေးက အာဏာရှင်ကို မမွေးထုတ်ပေမယ့် အာဏာရှင်ဟာ အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်တည်ပုံကို မသိဘဲ ကို မနေဘူး။ သူတို့ လေ့လာ ထားပြီးသား။ ဒါကြောင့် အာဏာရှင်စနစ်တည်မြဲအောင် ဘာသာရေးကိုလည်း ကောင်းကောင်းအသုံးချသွားနိုင်ကြတယ်။ အာဏာရှင်ဟာ အစွန်းရောက်ဘာသာရေးကို မွေးထုတ်ထားကြတယ်။ ဥပမာ အယာတိုလာ ခိုမေနီ။
အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလောက် ပူလောင်အိုက်စပ်နေတဲ့ ရာသီဥတုထဲ မိန်းမတွေကို စောင်မည်းကြီး ခေါင်းမြီးခြုံထားနိုင်အောင် ဘာသာရေးက စွမ်းပြီဆိုမှတော့ အဲဒီ တိုင်းပြည်တွေကို အုပ်ချုပ်စရာ အာဏာရှင်ကို မလိုအပ်ဘူး။ သူ့အလိုလို ဖြစ်တည်ပြီးသား။ ဒီမို အမည်ခံထားတဲ့ အစ္စလာမ္မစ် တိုင်းပြည်တွေ အတွင်းသားထဲမှာ ခုချိန်ထိ အာဏာရှင်စနစ်။
တဖန် ဘာသာရေး အစွန်းရောက်မှုကိုပဲ ဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုအောက်မှာ သွတ်သွင်းလိုက်ကြတယ်။ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ကပဲ ဒီမို ဖြစ်နေသလိုယူဆလိုက်ကြတယ်။ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့ ဦးနှောက်ဖွင့်ပေးမှုကို ဒီနည်းနဲ့ ရှောင်လိုက်နိုင်ကြတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လူသားပါကလား ဆိုတဲ့ အသိ ပျောက်သွားအောင်ထိ လူသားတန်ဖိုးကို ချပစ်လိုက်နိုင်ကြတယ်။ အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ အသက်သွေးကြောဟာ ဘာသာရေးပဲ။ ဗုဒ်ဓ၊ ခရစ်၊ အလာဟ် တခြားရှိဦးမယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုချင်ရင် ဟိုခေတ် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးတွေ တန်ခိုးထွားပုံကို တစ်ချက်လောက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူတို့ အနောက်နိုင်ငံမှာ နောက်ပိုင်း ဘာသာရေး အားနည်းလာတာရယ်။ နဂိုကတည်းက ဘု၇ားနဲ့ လူသားကြား ကွာဟချက် သိပ်မရှိတာရယ် ( ဥပမာ ဘုရားနဲ့ ထမင်းအတူစားတာတို့၊ စိတ်ဆိုးရင် ဘုရားကို ဆဲတာတို့) ကတစ်ကြောင်း ပြီးတော့ သူတို့လူမျိုးတွေ ခေါင်းပြောင်းတာကြောင့်ရော (မာတင်လူသာကင်းတို့ အပါအ၀င်) အဲဒီမှာ ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးမှုကနေ အတော်များများ လွတ်ကြပါတယ်။
အရှေ့တိုင်းကျတော့ ဘယ်ဘာသာဝင်တွေဟာ အရက်စက်ဆုံးလဲ။
ဘယ်ဘာသာဝင်တွေဟာ အသတ်အဖြတ် လက်အယဉ်ဆုံးလဲ။
ဗုဒ္ဓ အလာ ခရစ် စတာ တွေ
အာဏာသွေးကြော မရှိဘူးလို့ ပြောလို့ချင်တာလား
ဟုတ်တယ်ဆို ဘူတွေလဲ ဘယ်နိုင်ငံတွေလဲ ဥပမာအနေနဲ့
ဒီလိုပဲ စွတ်စွဲ နေမယ်ဆို
ဘာသာရေးကြောင့် အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်တယ် ဆိုတာနဲ့ ဘာသာမဲ့တွေမှာ အာဏာရှင် စနစ် မဖြစ်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါ။ ဘာလို့ဆို ကွန်မြူနစ်တွေဟာလည်း ဘာသာမဲ့ပဲ။ အာဏာရှင်စနစ်ပဲ။ သဘောက မဖြူဘူး ဆိုတာနဲ့ မမည်းဘူး။ မမည်းဘူး ဆိုတာနဲ့ မဖြူဘူး။ ခုနောက်ပိုင်း အနောက်နိုင်ငံတွေ ဘာသာမဲ့တွေ များလာတယ်။ ပြီးတော့တစ်ခါ ကမ္ဘာ့စစ်ပွဲဧရာမတွေဟာ ဘာသာရေးကြောင့် ဖြစ်တာများတယ်။ ဘာသာရေးဟာ ဟိုလေ မိန်းမလိုပဲ။ မရှိမကောင်း ရှိမကောင်း။ အဲဒါကြောင့် ဘာသာရေးမှာ ဟိုဘက် ဒီဘက် နှစ်ဖက်စွန်းကို မရောက်ဘဲ ခေတ်စနစ် (လူ့အခွင့်အရေးနဲ့အညီ) ခေါင်းကို ဖွင့်သင့်တာဖွင့်ပြီး လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ပြီးတော့တစ်ခါ လူတွေက ဘာသာရေးကို လုံးဝအထိမခံဘူး။ အမေစုကတောင် မကြောက်တရား ဟောပြီးသား။ သူ့ကို မကြိုက်ရင်တောင် သူ့ရှေ့ ဗြောင်ဗြောင်ပြောခွင့်ရှိတယ်။ ဒီလိုပဲ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သံသယရှိနေပြီဆိုရင် ဒါကို ဆွေးနွေးခွင့် ညှိနှိုင်းခွင့် ရှိရမယ်။ ဒါကို စွပ်စွဲတယ် လို့ ပြောလို့ မရ။ အခု အချိန်မှာ အာဏာရှင်စနစ်ကို မပြောရင် နောင် အမေစု မရှိချိန်မှာ ပြောခွင့်သာပါဦးမလား။
စာဖတ် အပ်ချုပ် ဘာသာရေးလဲ လုပ်တာတွေပါသတဲ့
လက်ရှိလဲ သံဃာတချို့ကို ကိုးကွယ်နေဆဲ အပြင် အလည်လာတဲ့
သားတော်မောင်နဲ့လဲ စေတီပုထိုး တက်ရှိခိုးတာပဲ
အတိတ် ပစ္စုပ္ပန် ဘာသာရေး မကင်းခဲ့ဘူး
သူမအတွက် အားဆေး တခွက် မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့
ခုချိန်မှာ သူမဟာ အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့
ကဲ ဘလိုဆက်ငြင်းမလဲ ☺
ဘာသာ​ရေးအကဲဆတ်​တဲ့တိုင်းပြည်​ရဲ့ ဒီ​ရေချိန်​မျိုးမှာ Global icon ကြီးမပါ​ကြေး … သူ​တောင်​ ထိပ်​တိုက်​မ​တွေ့​သေးပဲ တဖြည်းဖြည်းပြင်​ယူ​နေတယ်​လို့ မြင်​ပါတယ်​ …
ဒီပို့ရဲ့အနှစ်​သာရက လွတ်​လပ်​စွာထင်​မြင်​ပိုင်​ခွင့်​ ကို​ဇောင်း​ပေးထားတယ်​လို့ ယူဆတယ်​ဗျ…​တကယ်​လဲ ..ကျွန်​​တော်​တို့ အဲ့ဒီအခွင့်​အ​ရေးမရ​သေးပါဘူး..
​ထောက်​ပြချင်​တာက ..ဗမာကာဒီနယ်​ကြီးတပါး ဥ​ရောပမှာ ထင်​ရာကို​ပြောလို့ ဝိုင်းဆဲထားတာ လပိုင်းပဲရှိပါ​သေးတယ်​ …
ကိုဆော ပြောတာလည်း ဟုတ်ပါတယ်။
ဗုဒ်ဓဘာသာထဲမှာ အမေစုလို လူတစ်ယောက် ထွက်ပေါ်ခဲ့သလို တခြား ခရစ်ယာန်ထဲမှာလည်း အကျော်အမော်တွေ ရှိတယ်။ လူကောင်းတွေ တစ်ပုံကြီး။ အစ္စလာမ် ထဲမှာလည်း သူတော်ကောင်းတွေ တစ်ပုံကြီး။ ဒါပေမယ့် ဥပမာ ဗျူရိုကရက် အသိုက်အ၀န်းက လူတစ်ယောက် သဘောကောင်းလို့ ဗျူရိုကရက်တွေ အားလုံး သူတော်ကောင်း သတ်မှတ်လို့ မရသလိုပါပဲ။ ဒီစနစ်ထဲက လူတစ်ယောက် ကောင်းလို့ ဒီစနစ် ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ မရသလိုပါပဲ။ ဒီဘာသာထဲက လူတချို့ကောင်းတာနဲ့ ဒီဘာသာ ကောင်းတယ် ပြောလို့ မရနိုင်ပါ။
ဒီဘာသာထဲက လူတချို့ မကောင်းတာနဲ့ ဒီဘာသာ မကောင်းဘူးလို့လဲ ပြောလို့ မရနိုင်ပါ။ :-)))
ဆွေးနွေးဖို့ အစ ဖော်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
ညီမ က “ဘာသာရေးက အာဏာရှင်စနစ်ကို မွေးထုတ်ပေးတယ်လို့ ယုံပါတယ်။” ပြောတယ်။
ဒီတော့ ဘာသာရေး က အစပေါ့။
ဘာသာရေး ဆိုတာ ယုံကြည်သက်ဝင် ကိုးကွယ်မှု ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက် လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်နိုင်မလား မသိဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့ လူပြိန်း နားလည်မိတာကို ပြောရရင် (မှားတယ်ထင်ရင် ထောက်ပြပေးကြပါ)
ဘာသာ တိုင်းမှာ “လုပ်ထုံး လုပ်နည်း စည်းကမ်း ဥပဒေ သတ်မှတ်ချက်” တွေ ရှိနေပါတယ်။
အဲဒါတွေ ရဲ့ အထက်မှာတော့ ဘာကြောင့် ဒီလို စည်းကမ်း နည်းလမ်း တွေ ကို လိုက်နာရသလဲ ဆိုတဲ့ ဟိုးရှေးခေတ် အဆက်ဆက် က နေ ဒီ နေ့ထိ လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ ဆုံးမ ညွန်ကြားချက် မှတ်တမ်း တွေ ရှိနေတာ ထပ်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ မှတ်တမ်း တွေ ကို ဘုရားသခင်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကြီး နှစ်ခု မှာ ကျမ်းစာ နဲ့ ကိုရန် လို့ ခေါ်ပြီး ကံအကြောင်း အကျိုး နဲ့ ဘဝ သံသရာလည်မှု အခြေပြုတဲ့ ဘာသာကြီး ထဲ က တစ်ခု မှာတော့ ပိဋကတ် လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အဲဒီ အထဲ က ရေးသားချက် မှတ်တမ်း တွေထဲ လူတွေ ကို အဓမ္မ နိပ်ကွပ် အနိုင်ကျင့် တဲ့ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက် တွေ ပါနေခဲ့ ရင် အဲဒါကို အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ ဘာသာရေး ဖြစ်သွားနိုင်သပေါ့။
မေးပါရစေ ညီမ ရယ်။
အဲဒီ မှတ်တမ်း တွေ က ဘယ်လို ဖြစ်လာတာလဲ?
“လူ” လို့ သာ ဖြစ်နေခဲ့ရင် ပေါ့။
ပြသနာ ကို ဖြေရှင်းဖို့ အစ ကို ကြည့်လိုက်ရင် စနစ်တစ်ခု ရဲ့ အစ ဟာ “လူ” ကိုယ်တိုင်ပါဘဲ။
လူ ဆိုရာမှာလဲ လူတိုင်းမှာ ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည် မရှိကြပါဘူး။
ဒါကြောင့် လူတိုင်း ဟာ တစ်ခြားသူတွေ ကို ခေါင်းဆောင် ဖို့ (တာဝန်သတ်မှတ်မပေးရင်) အလိုအလျောတ် ရှေ့ကို တက်မလာနိုင်ကြပါဘူး။
အများ ထဲ မှာ ထူးခြားစွာ ခေါင်းဆောင်တတ်တဲ့ စွမ်းရည် ရှိတဲ့ လူ တစ်ယောက် (သို့) အနည်းစု က သာ ခေါင်းဆောင်မှု ပေးကြ၊ စည်းကမ်းနည်းလမ်း တွေ ညွန်ပြ ကြပါတယ်။
ဒီလို လူတွေထဲ မှာ ထိုးထွက်နိုင်တဲ့ သူ က လှပတဲ့ စိတ်နှလုံးရှိတဲ့ ဗီဇမျိုးစေ့ ရှိခဲ့ရင် အဲဒီ အဖွဲ့အစည်း အတွက် လှပတဲ့ ပုံရိပ် ရမှာပါ။
မဟုတ်ဘဲ ကြမ်းကြုတ် ရက်စက် တဲ့ စိတ်နှလုံးရှိတဲ့ ဗီဇမျိုးစေ့ ရှိသူက ထိုးထွက် ဦးဆောင်မှုပေးခဲ့ရင် အဲဒီ အဖွဲ့အစည်း ဟာ အကြောက်တရား အောက်မှာ ဝပ်ဆင်းသွားရတော့တာပါဘဲ။
ဒါကြောင့် စနစ် တစ်ခု လို့ ပြောရင်
အဲဒါရဲ့ အစ ဟာ နတ်သကြား ဖန်တီး တာ မဟုတ်ခဲ့ရင်
အဲဒီ စနစ် အကောင်း/အဆိုး ကို ပြုလုပ်သူဟာ လူ ပါဘဲ။
ဒီတော့ အပြစ်များရှိရင် လူ တွေ ကို သာ အပြစ်တင်ပါ။
စနစ်ကို အပြစ်တင်တာ နဲ့ ဘဲ ပြီးမသွားဖို့ပါ။
မဆိုင်တဲ့ လူဖန်တီးထားတဲ့ အရာတွေ ကို အပြစ်မပုံချင်ကြပါနဲ့။
ပိုအရေးကြီး တာ လူ က ဖန်တီးထားတဲ့ စနစ် ကောင်း ကိုဖြစ်စေ၊ စနစ်ဆိုး ကိုဖြစ်စေ ပါဝါကြီးလာတဲ့ လူ ကဘဲ ပြန်ဖျက်နိုင်တာ ကို သိကြပါ။
သူကြီး အတွက် မေးခွန်း
ထေရဝါဒီ မှတ်တမ်း တွေထဲ တကယ်ဘဲ လူတွေ ကို အဓမ္မ နိပ်ကွပ် အနိုင်ကျင့် တဲ့ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက် တွေ ပါသလား။
ဥပမာ – လူတွေ က ဘုန်းကြီး တွေ ကို ထိုင်ကန်တော့ တာ မလုပ်ရင် အဲဒီ လူကိုသတ်ပစ်ရမယ်တို့ များ ပါနေလေရော့သလား။ သီလ ဖောက်ဖျတ်ရင် အပြစ်ပေး လို့ များ ပါနေရော့သလား။
ကျွန်မ လက်တွေ့အမြင်မှာတော့ ဘုန်းကြီး တွေထဲ မှာ အင်မတန် နူးညံ့သိမ်မွေ့ တဲ့၊ ဒေါသမရှိတဲ့၊ ဘာလုပ်လုပ် ခွင့်လွှတ်စိတ် နဲ့ ကြည့်တတ်တဲ့ ရဟန်းတွေ အများကြီးပါ။
တကယ်လို့ ကျွန်မ က ဘုန်းကြီး တွေ ဟာ အာဏာရှင် ပါလို့ ပြောရင်လဲ “ဟုတ်ချင်လဲ ဟုတ်မှာပေါ့” လို့ ဒေါသမပါ ပြန်ငြင်းချက်မထုတ်ဘဲ ခပ်ပြုံးပြုံး နဲ့ ဖြေမဲ့ ရဟန်းတွေ အများကြီး ပါ။
အားလုံးလို့ မဆိုပါ။ အများစု လို့လဲ မပြောနိုင်ပါ။
ဒါကြောင့်လဲ သူကြီး မှာ ဒီလို မေတ္တာစိတ် ရှေ့ထားတတ်တဲ့ ရဟန်းသံဃာ များ နဲ့ မဆုံဖူးလို့ ဒီလို သိမ်းကျုံးဝေဖန် နေတာ လို့ ဘဲ ကျွန်မ လက်ခံထားလိုက်ပါတော့မယ်။
မြန်မာပြည်က.. ထင်ရှား(ခဲ့)(ဖူး)တဲ့ဆရာတော်ကြီးတော်တော်များများ.. တွေ့ဖူး.. တရားလျှောက်ဖူး.. သလို.. ဓမ္မာစရိယလူတွေနည်းလည်း ဆွေးနွေးဖူးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း..။
ဦးသုခတို့.. ဓမ္မစရိယဦးဌေးလှိုင်တို့.. စာအုပ်တိုက်ကိုဝင်ထွက်နေတာမို့.. ခဏခဏတွေ့…။
အဲဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးသိဆို.. YMBA ကထုတ်တဲ့ …ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်းမှာလည်း.. စာမူတာဝန်ခံလုပ်ဖူးတာကိုး..။
ထေရာဝါဒ လို့ပြောပြီးပြီ..။ ထေရတောင်မဟုတ်..။
ထေရ ဆိုတာ.. ထေရီ၊(ရဟန်းမ).. ထေရာ(ရဟန်း) ၂ဖက်ပါရတာ..။ (မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာပြည်မယ်.. ထေရီတွေကို.. အသိအမှတ်မပြု.. ဖမ်းပြီးထောင်ချပါ၏)
အခုက.. ထေရာ.. ဘုန်းကြီး.. တို့ရဲ့… ၀ါဒ..။ မြန်မာပြည်သာအဓိက…
တော်ပါတော့ မဟာသူကြီးမင်း ရယ်။
ရွာထဲ မယ် ကျွန်မ အစွန်းရောက်တာ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆီကို မျက်နှာမူထားလို့။
ပြုံး အစွန်းရောက်တာ က သူ အထူးပြု လေ့လာဖတ်ရှုပြီး ဘာသာပြန် နေတဲ့ စာအုပ် တွေ ဆီက အကြောင်းအရာတွေ ကို မျက်နှာမူထားလို့။
သူကြီး မင်း က တော့ ဟိုဘက် တစ်မျိုး ဒီ ဘက် တစ်ဖုံ။
မနေ့ တစ်နေ့ က စာရွက် နဲ့ ထုတ် တဲ့ စာမျက်နှာ တွေ မှာတော့ ဘုန်းကြီး အကြောင်း အင်တာဗျူး ထည့်။
အဲဒီထဲ မှာ “Q: မြန်မာ့ဂဇက်ကနေတဆင့် စာဖတ်ပရိသတ်တွေကို ဆရာတော်ဟောချင်တဲ့တရားချီးမြှင့်ပေးပါ။” လို့ ဆိုတာပါအောင်ထည့်။
ပြီးတော့ အဲဒီ ဘုန်းကြီးတရား ကို နားဝင်မဝင် တော့ မသိ။
ဒီ ဘက် ကို လာပြီး ဘုန်းကြီး တွေ အကြောင်း မကောင်း ပြော။
(ကောင်းသူ/ မကောင်းသူ ခွဲ ပြောရင် တော်သေး၊ အခုတော့ ဝါးလုံးရှည် နဲ့ရမ်း)
ဘုန်းကြီး တွေ ကို မရှိစေချင်၊သူတို့ ကို မကိုးကွယ် စေချင် ရင်လဲ ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ပြလေ။
ဘုန်းကြီး တွေ ကို တရားဟောခိုင်း မဲ့ အစား မေးခွန်း ထုတ်လေ။
ဒီတော့ လူ တွေ မှာ ဘာလုပ်ရမှာတုန်း။
သူကြီး ရဲ့ ဟိုဘက် စာစောင် ထဲ က ဘုန်းကြီး တရားချီးမြှင့်တာ ကို နာယူ ရမှာလား?
သူကြီး ရဲ့ ဒီဘက် ဒီဂျစ်တယ် ဆိုက် ထဲ က သူကြီးမင်း တရားချီးမြှင့်တာ ကို နာယူ ပြီး အဲဒီ လောဘ ဒေါသကင်း အောင် တရားပြ နေတဲ့ (သူတို့ လဲ ကျင့်ကြံနေတဲ့) ဘုန်းကြီးတွေကို လူထွက်ဖို့ ပြောရမှာလား ရမှာလား?
သူကြီး ကြည့်လို့ ရတဲ့ ဘုန်းကြီး တွေက ထေရ မဟုတ်လို့ လို့ ရော ပြောချင်သလား?
ဘုန်းကြီး တွေ ကြား ဇာတ်ခွဲ အဆင့်ခွဲ ဖို့ အတွက် အဲဒီလို နာမည် တွေ တပ် အစွဲထားနေရင် လူတွေ အတွက် တရားမဟောသင့်ဘူး လို့ ကျွန်မ ပြောရင် လက်ခံ မလား?
သူကြီး ရော သူကြီး တရားဟောခိုင်း တဲ့ ဘုန်းကြီး တွေ ကို ကျွန်မ ပြောသလို ပြောရဲလား?
ပြီး ရင် သူတို့ ဆီက အဖြေ တွေ ကို ထုတ်ပြရဲလား?
ကျွန်မ ပြောတဲ့ ဒီ စကား ကို ကျွန်မ တရားသွားနာတဲ့ ဘုန်းကြီး ကို ပြောရဲ တယ်။
အဖြေ ကို ထုတ်ပြရဲတယ်။
​ဖျောင်းးးးး ​ဖျောင်းးးး ​ဖျောင်းးးးး
ဒီကွန်​မန့်​​လေး ဖတ်​ရတာ အရသာရှိလိုက်​တာာာ
Thanks ကဆာမိ။ :-))
ဒီလိုကိစ္စ.. ပြဿနာ.. ကျိန်စာလွတ်ဖို့က.. ၁နှစ်၂နှစ်.. ၅နှစ်၁၀နှစ်နဲ့မပြီး…။
ကျုပ်ဘာလုပ်နေလဲ.. အရီးလတ် ..ရိုးတိုးရိပ်တိတ်တောင်… မသိတာ အံ့သြစရာ…
အရီးကွ ဘရာဗို အရီးဘက်နေရှိတယ်။
ဟိုဟာ ကိုးကွယ်လဲ မလွတ်
ဘာမှ မကိုးကွယ်လဲ မလွတ်
အိုအသင်… ၂၁ရာစုလူသား.. ဘာကိုမှမကိုးကွယ်ပါနဲ့..။
အခု ရွှေပြည်ထဲ ဘုန်းကြီး တရားပွဲ မှာ သီချင်းဆိုသူဆို၊ ကသူက၊ တရားဟောကာနီး တောင် အွန်လိုင်းချက် လုပ်ပြီး ဒကာမ တွေ နဲ့ ဟီးဟီးဟားဟားလုပ်၊ သူလုပ်၊ ဆဲလ်ဖီ ဆွဲသူဆွဲ၊ နိုင်ငံရေးစကား တွေ ပြောသူပြော၊ သူခိုးအားပေး လုပ်သူလုပ် နဲ့။
ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်စေတဲ့ တရား တွေတောင် ပေါ်လာပြန်ပေါ့.
ဒီတော့ လူငယ် တွေကြား လှောင်ပြောင်စရာ ဟာသ တွေ ဖြစ်လာပြီ။
အဲဒီလို ဘုန်းကြီး တွေ ကို လူတွေ က အရိုအသေ တန်လာပြီ။
ဒီနေ့ခေတ် က အမေတို့ အဖွားတို့ ခေတ်လို အတန်းပညာ မရှိ တွေ မဟုတ်တော့ဘူး။
ပညာတတ် တွေများလာပြီ၊ ဆင်ခြင် ဝေဖန်တတ်သူတွေများလာပြီ။
ဒီလို လူတွေ ကြား ကို တော်ရုံ တရားဟော နဲ့ တော့ ဝင်လို့ ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
ပိုဆိုးတာက အခု နောက်ပိုင်း ဘုန်းကြီး အငယ်တွေ က ပိုပြီး စည်းကမ်းပျက်လာကြသလားဘဲ
ပညာကလဲ မဲ့ တော့ ပိုဆိုးလာမယ်။
ဟိုးအရင် ရှေးခေတ် စာသင်သား ဘုန်းကြီးတွေ လို စာတွေ အာဂုံဆောင်နိုင်မယ် မထင်။
ဒီလို ဘုန်းကြီး လူတန်းစား ထဲကို အစိုးရရဲ့ အာဏာစက်သုံးပြီး သန့်ရှင်းမပစ်ရင် နောက်ပိုင်း လူငယ်တွေ အတွက် တော့ ဘာသာရေး ဟာ ကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ငရဲ ဆိုတာ ကြောက်ဖို့ မပြော နဲ့ ယမမင်း ကို တောင် လှောင်လာကြတာ။
ဒါပေမီ ဒီ လို ရှင်းဖို့ ကို အစိုးရက တာဝန်မယူရဲ၊ မလုပ်ရဲ လို့ ဘုန်းကြီးချင်းတော့ တိုက်မပေးသင့်ဘူး။
မဟုတ်ရင် သူကြီးတို့ ဂိုဏ်းသားများ ပြောလေ့ရှိတဲ့ မဟန က အာဏာရှင်ဖြစ်ဦးမယ်။
ဒီတော့ အစိုးရ ကသာ ပြတ်ပြတ်သားသား ကိုင်တွယ်ရမှာဘဲ။
အရင်ဆုံး စည်းကမ်းထုတ်၊ ဥပဒေပြဌာန်း၊ သတိပေး၊ မရရင် လူလဲခိုင်းပြီး အရေးယူဘဲ။
ကျွန်မ မှာသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရရင် အရှုပ် တွေအားလုံး ကို ဗျင်းမှာ။
ဒီလို လုပ်လို့ အာဏာရှင် မကလို့ အာဏာရှင် ဘိုးအေဘဲ ခေါ်ခေါ်။
မှန်တာလုပ်တာ တွန့်ဆုတ် နေစရာမလို ထင်ပါတယ်။
(ကြို ပြောထားမယ်။အပြာရောင် တရား ကိုလဲ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်အောင် လှည့်ဖျားမှု နဲ့ ဗျင်းမှာလို့)
ဒီနေ့ တောင် Facebook ထဲ က Post တစ်ပုဒ် ကို ဖတ်ပြီး ရီရမလို ငိုရမလို ဘဲ။ (အောက်တွင် တွဲ ထည့်ထားသည်)
သို့ပေမဲ့ ဒီလို စာတွေ၊ ကာတွန်း တွေ များလာတာ ကောင်းတယ်ခေါ်မှာဘဲ။
လှောင်ပြောင်ခံရတယ် ဆိုကထဲ ကိုက အဲဒီ အဖွဲ့အစည်း ဟာ အရည်အသွေး နိမ့်ကျလာတာကို ပြတာမို့ သတိထားစရာပေါ့။
သတိထားမိလဲ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို မဖယ်ရှားဘဲ ထားကြရင် ငခုံးမ တစ်ကောင်ကြောင့် လဲ တစ်လှေလုံးပုပ် ပါတယ်။
အခုဟာက အနည်းစု မဟုတ် အများစု ပုပ် နေကြတာ။
ဒီအတိုင်းသာ ဆက်သွားရင်တော့ အေးသီးရစ် လူတန်းစား ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ကျွန်မ ကတော့ နဂို ထဲ က ဘာသာစွဲ မရှိသူမို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လို့ အမည်မတပ်ရလဲ အကြောင်းမဟုတ်။
ဒါပေမဲ့ တကဲ့ ဗုဒ္ဓ ရဲ့ တရား အစစ် ကို တို့ လက်တွေ့ကျင့်သုံး ဖို့ အမြဲကြိုးစား နေမှာ တော့ သေချာပါတယ်။
Facebook မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
(သူ့ မှာ selfie ဆွဲနေတဲ့ ဘုန်းကြီး ပုံပါတယ်။ အဲဒီ ပုံ မှာ တရား ဟောသွားတော့ မယ်။
ပထဆုံး ပွဲ မို့ ဖိုက်တင်း လို့ မန့်ပြီး အားပေးကြပါ လို့ ရေးထားတယ် )
20 June at 20:35 · Singapore ·
တနေ့သ၌ကျွန်ုပ်သည် ရပ်ဝေးမှနေ၍ ကိုးကွယ်ရာဦးဇင်းအားသတိရ၍ ဖုန်းလှမ်းဆက်မိလေ၏။ ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်ရာ ဦးဇင်းသည်ကား တက်ခေတ်၌ သင်္ကန်းစီးလေသော
တက်ဘုန်းကြီးဖြစ်၍ မအိုရာမနာရာမသေရာဖြစ်သော အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကို IT နည်းပညာဖြင့်ရှာဖွေနေလေရကား , ဖေ့စ်ဘုတ် ဗိုင်ဗာ ဘာညာသာရကာ ၎င်းအရာတို့ကိုမတ်ဇူကာဘတ် နှင့် စတိဗ်ဂျော့လောက်နီးနီးလွန်စွာမှ တတ်ပြွန်လေသောဟူ၏။
-ဟဲလို ဟဲလို အရှင်ဘုရားနေကောင်းပါရဲ့လားဘုရား။
– ဟေ့ဉာဏ်ကျယ်ဘတုတ်လားကွ ။ မင်းဖုန်းလိုင်းမကြည်ဘူးကွ ခဏလေးငါ ဗိုက်ဗာနဲ့ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဟုဆိုကာ ဖုန်းချပြီး ချက်ချင်းပင် ပြန်လည်ခေါ်ဆိုလေသောဟူ၏
– အရှင်ဘုရား တပည့်တော်အိမ်သစ်လေးတက်ဖို့အတွက် အလှူလုပ်ချင်လို့ပါဘုရား။ အရှင်ဘုရားကြွလာနိုင်ပါ့မလားဘုရား။
– ဟ ဘတုတ်ရ ဒီခေတ်ကြီးမှာကွာ မင်းငါ့ကို ဖေ့စဘုတ်ကနေသာဗီဒိုကောခေါ်လိုက်ကွာ ငါကအဝေးကတရားပေးမပေါ့ကွ။
– အရှင်ဘုရား လိုင်းမကောင်းရင်ဗီဒိုကောမရဘူးဖျာ့။
– ဘတုတ်ရာ မင်းစွန်းပိန်းသကိုးကွ။ ဗီဒိုကောမရရင်ငါ ငါးပါးသီလကို audio file နဲ့ပို့လိုက်မကွာ။ မင်းကလည်းအာမဘန္တေကို audio file နဲ့ပြန်ပို့လိုက်ပေါ့ကွာ။ မင်းမလဲ ငါ့တပည့်သာပြောတယ် စွန်း အလင်းပြရတယ်။ ငါ့လခွေး လေတာပေါ့ အားတီရာ အဲအဲ ဒကာတုတ်ရာ။
– အေးဒီထက်မိုက်တာရှိသေးသဟ။ မင်းဘုန်းကြီးငါးပါးပင့်ချင်ရင် အီးဘန့် လုပ်ပြီးဖိတ်လိုက်ကွာ ငါကျောင်းကအာဂန္တုတွေပါဝင်ဂျွိုင်းခိုင်းလိုက်မယ်။ နှယ်နှယ်မထင်နဲ့ကွ ငါ့မှာလဲ ငါ့ပုရိတ်သတ်နဲ့ငါကွ။ အခုတောင် နောက်လိုက်(ဖော်လိုဝါပေါ့ကွာ) တောင် ၂၅ ယောက်ရနေပြီဟ။ လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဟ ခင်ရင်မန့်သွားတို့။ ဆယ်ဖီဆွဲပြီး ခရုလားဘာညာတော့လုပ်ရတာပေါ့လေ။ တခါတလေတရားမဟောခင် ဖိုက်တင်းတွေဘာတွေ မန့်တောင်းရတာပေါ့ကွာ။
– ဒါများကွာ ငါ့ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်ကနေ ယမမင်းကို တဂ်တွဲပေးပါ့မယ်ဟ။ မင်းလဲ လိုလိုပိုပို သာဓုခေါ်သံကိုဆောင်းကလောက်ထဲထည့် ပြီး မင်းသေလို့ ယမမင်းနဲ့တွေ့မှ ပတ်စ်ဝေါ့ပေးဖွင့်ခိုင်းပေါ့လေ။
– ကောင်းတာပေါ့ဘုရား တပည့်တော်လည်း နဝကမ္မကို စတစ်ကာနဲ့ပို့လိုက်ပါမယ့်ဖျာ့ ဟုဆိုလေလျှင်ကား ဦးဇင်းလဲ ဒေါသထွက်ကာ စောင်ကလေး ငလူးလေးဟုရေရွတ်လေသောခဏ၌ ဖုန်းဒေတာကုန်၍ စကားပြတ်သွားလေသတည်း။
– အောက်ပုံတွင် ဆရာတော်၏ပုံကိုဖူးမျှော်နိုင်ပြီး ကော်မန့်တွင် နဝကမ္မအလှူငွေများကို ရှုစားကုန်လော့။
ပံ့ပိုးခဲ့ကြတာ တပုံတပင် မဟုတ်ဘူးလား
အာဏာ ပါဝါ အသုံးချရမှာဘဲ ဂျီးဒေါ်ရဲ့
ဆုတ်ခေတ်မှာ သိပ်မမျှော်လင့်တာ ကောင်းတယ် အံတီမျှစ်… သက်သာသလိုနေ။။
အမှန်က မဝင့်လိုထင်ရာခေါင်းမာမာ ပြောရဲတဲ့သူတွေက ခေတ်တခေတ်ပြောင်းဖို့အတွက် တော်တော်လိုတယ်ဗျ
ဒီရက်ထဲ မှာ Study တစ်ခု အကြောင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရတယ်။
အဲဒီ Study က ဘာလဲ ဆိုတော့ Social Media (Facebook) အကြောင်းပါ။
Facebook က လူတွေ ကို ကမ္ဘာ နဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့၊ နေရာ အနှံ့ နယ်ပယ်အသီးသီးက အကြောင်းတွေ ကို ဖတ်နိုင်ဖို့ အဲဒီ အကြောင်းတွေ ကို ရှုဒေါင့်စုံ က ဝေဖန် သုံးသပ် ဆွေးနွေးနိုင်ကြဖို့ တီထွင်ပေးခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ လူ တွေ အများစု က အဲဒီ လို နေရာစုံ၊ ရှုဒေါင့်စုံ က ကြည့်မြင် သုံးသပ်ဖို့ မကြိုးစားကြဘဲ သူတို့ အတွေး အမြင် နဲ့ တူတာ၊ ကြိုက်တာ တွေ ကိုဘဲ ရှာဖွေဖတ်ရှု တတ်ကြတယ် ဆိုပါတယ်။
အမြင်မတူတာ တွေ့ရင် ဘာကြောင့် အမြင်မတူလဲ ဆိုတာ ကို ဆက်မသွားတော့ဘဲ Block တောင် လုပ်တတ်ကြ တယ်ပေါ့။
ရွှေပြည်မှာ တော့ ဆဲကြ ဆိုကြပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့ ထင်မြင်တဲ့ အကြောင်း တွေ က ဘဲ ပိုပိုပြီး မှန်သလို ထင်လာကြပါတယ် တဲ့။
အဲဒါကို “echo chamber” “ကိုယ့်ပဲ့တင်သံကိုဘဲ ကိုယ်ပြန်ကြားရတဲ့ အလုံပိတ်အခန်း လေး” ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး နဲ့ တင်စားထားပါတယ်။
ဒီလို လူ တွေ ဒီလို အမြင်ကျဉ်းကုန်တာ ဟာ Facebook ကြောင့်လို့ ပြောကြပါတယ်တဲ့။
ဆိုတော့ တကယ်ဘဲ Facebook က တရားခံ တဲ့လား?
“ဘာသာရေး” ဆိုတာ တကယ်တော့ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင် ရေး အတွက်၊ လောက ထဲ နေနည်း တွေအတွက် အများကြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စဉ်းစားတွေးခေါ် နိုင်ဖို့၊ လေ့ကျင့်သင်ကြား နိုင်ဖို့ အတွက် နယ်ပယ် တစ်ခုပါ။
ခရစ်ယာန် ဘာသာ ရဲ့ ကျမ်းစာ ထဲ မှာလဲ အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာ စာသားတွေ ကို ဖတ်ဖူးပါတယ်။
လိုတာယူ မလိုတာ ပယ်နိုင်တာတွေ ရှိပါတယ်။
ကိုရန် ကျမ်း ကတော့ ပေး မဲ့သူ မရှိလို့ ဖတ်ခွင့်မရှိသေးပါဘူး။
ခရစ်ယာန်ကျမ်း သဘော မှာ နဲနဲ ပြင်းထန်တဲ့ အယူ အဆ တွေပါတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ထဲမှာလဲ အတုယူသင့်တာ ဖယ်သင့်တာ တွဲနေမှာလို့ ယုံပါတယ်။
ဒီလိုဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ ဝါဒီ မျိုးစုံ ထဲ မှာလဲ ဘဝ နေနည်း အတွက် ဆောင်သင့် ကျင့်ကြံသင့်တာ တွေ ရှိသလို ပယ်သင့်တာတွေ လဲ ရှိမှာပါ။
ဟိဒ္ဒူဘာသာ မှာလဲ ဒီအတိုင်းသဘောပါဘဲ။
နေ့စဉ်ဘဝ ထဲ မှာ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး တွေ ဟာ အမြဲတွဲ နေပါတယ်။
မလိုချင်ရင်လဲ ရှိပြီး ဖြစ်နေပြီမို့ ချန်ထားလို့ မရပါ။
ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံးက အရာရာ ကို အစွန်းလွတ် ကြည့်တတ်ဖို့ သင်ကြားပေးဖို့ သာ ရှိပါတယ်။
ဥပမာ – နောက်ပိုင်း ကျောင်းသင်ခန်းစာ တွေထဲ မှာ ဒီလို ဘာသာမျိုးစုံ အကြောင်းတွေ၊ သူများ တွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ အကြောင်းတွေ ကို ပြောပြ ဆွေးနွေးပေးဖို့ ကောင်းပါတယ်။
အလယ်ကို မြင်အောင် တည့်ပေးနိုင်မှ အစွန်းရောက်စိတ် တွေ ဖြစ်မလာမှာပါ။
ဒီအတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန က တာဝန်ယူပြီး ဆောင်ရွက်ပေးသင့်တယ်။
ကျောင်း မှာ သင်ကြားတာ ဟာ ပိုပြီး ထိရောက်မှုရှိတာမို့ပါ။
အကြောင်းအရာ ပြသနာ တွေ ကို ကိုယ်သန်ရာ အလုံခန်း ထဲမှာဘဲ ထည့်ပြောနေရင်တော့ မကောင်းတာဆိုလဲ မကောင်းတာတွေဘဲ ပဲ့တင်သံ ပြန်ရိုက်နေပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းတာဆိုလဲ ကောင်းတာ တွေချည်းဘဲ ပဲ့တင်သံ ပြန်ရိုက်နေပါလိမ့်မယ်။
အားလုံး ရဲ့ အကောင်းအဆိုး ကို ခွဲခြား ကြားသိဖို့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။
စစ်တပ် နဲ့ ဒီမို တွေ ကြား ဒီ အစွဲ၊ ဒီအစွန်း သဘောတွေကို မြင်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ အမြင်မတူရင်လဲ ရှောင်သွားဖို့ ထက် ကိုယ့်အမြင် ကို ပြောကြည့်၊ ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
သူများ အမြင် ကို လဲ တတ်နိုင်သမျှ ခံစားကြည့်ပါ။
ကိုယ့်ဘက် ကို ဆွဲလို့ ရချင်မှ ရမယ်။
သူ့ဘက် ကိုလဲ လိုက်လို့ မဖြစ်ချိန် အတိုးအလျှော့ လုပ်ပြီး ညှိဖို့ သာ ကြိုးစားပေးကြဖို့ပါဘဲ။
ဒေါ်ဝေါင်းလေး မှတ်ချက်လိုဘဲ မျှစ်ညီမ ရဲ့ ဒီလို အတွေးတွေ ချပြတာကောင်းပါတယ်။
အဲဒီက နေ ကောင်းတာတွေ ဆွဲယူနိုင်ရင် ပိုကောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ် ဖြစ်ပြီး စနစ် တွေ ကို ပြောင်းနိုင်တာပေါ့။
မတူတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ လူ တွေ အတူပေါင်းစည်းနေနိုင်ဖို့ မတူတာ ကို မတူဘူး ဆိုတဲ့ သတိ အမှတ် လေးတွေ ထားနိုင်ဖို့ သာပါဘဲ။
အပြန်အလှန် လေးစားမှု ရှိဖို့သာပါဘဲ။
အဲဒီအဆင့် တွေ က နေ ကျော်လာပြီး သူတစ်ပါး တွေ ကို အနှောက်အယှက်ပြူလွန်း၊ အစွန်းထွက်လွန်း လာရင်တော့
အစွန်းတွေ ကို ဆွဲဖယ်ဖို့ မျှတတဲ့ တရားဥပဒေကောင်းကောင်း တစ်ခု အဓိကနေရာက လိုတာပါ။
အဲဒီ အတွက် ကတော့ အစိုးရ တာဝန်ပေါ့။
တာဝန်မကျေရင်တော့ လဲ ပြန်ဖြုတ်ပေါ့။
အာဏာရှင် အစိုးရ မဟုတ်ရင်တော့ တရားမျှတမှုအတွက် တာဝန်ကျေရမှာပါ။
လောလောဆယ်တော့ အချိန်လေးပေးဖို့ လိုမလားဘဲ။
ဒီတော့ ညီမပြုံး ၊ သူကြီးမင်း နဲ့ တစ်ကွ ချစ်သော ရွာသူ/ရွာသားများ (ကိုယ်တိုင် အပါအဝင်) အတွက် အမှာစာ ပါးပါရစေ။
ကျေးဇူးပြုပြီး အကြောင်းတစ်ခု ကို အသံလုံခန်းထဲ ဝင်ပြီး နားမထောင်ကြဘဲ အပြင်ထွက်ပြီး နားထောင်ကြည့်ကြပါ။
ဒီတော့ မှ ကိုယ့် အသံ အပြင် တစ်ခြားသူ တွေ ရဲ့ ခံစားချက် တွေ၊ အသံတွေ၊ အမြင်တွေ အားလုံး ကို သိနိုင် ကြားနိုင် ပြီး သူတို့ နေရာက ဝင်နေကြည့်တတ်မှာပါ။
အဲဒီကနေ ပိုကောင်းတာတွေ ကို လောက အကျိုးအတွက် ယူနိုင်ဖို့ စိတ်ထားကြည့်နိုင်ကြမယ်ထင်ပါရဲ့။
( ဤအမှာစာ ကို ကျောက်စ် ရဲ့ ဝက်စာ လိုဘဲ သဘောထား အမြဲနွေးနေကြပါ)
သူကြီး မင်း ၏ အစွန်းထွက် သည် ရွာ တွင် ဘရိန်း ကစားရန် ငြင်းပွဲ ဖြစ်စေဖို့ ဟု တွေးမိပါသည်။
ညီမပြုံး အစွန်းထွက် သည် ဘာသာပြန်ရန် စာအုပ်များ အပေါ် အာရုံများ နေလို့ဟု တွေးမိပါသည်။
မြ ရဲ့ အစွန်းထွက် က တော့ လေဒီ ကို ချစ်လွန်းလို့ ဟု တွေးကြပါလော့။
ဒီတစ်ခါတော့ လေဒီမြကို အလျှော့ပေးလိုက်ပြီ
သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာဘဲ။ <3 <3 <3 :-))))
ဆရာထက် တကာတွေက သဲသဲလှုပ်နေကြလို့ ပိုဆိုးသွားတယ် ထင်ပါ့..
ပြီးတော့တစ်ခါ လူတွေက ဘာသာရေးကို လုံးဝအထိမခံဘူး။ အမေစုကတောင် မကြောက်တရား ဟောပြီးသား။ သူ့ကို မကြိုက်ရင်တောင် သူ့ရှေ့ ဗြောင်ဗြောင်ပြောခွင့်ရှိတယ်။ ဒီလိုပဲ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သံသယရှိနေပြီဆိုရင် ဒါကို ဆွေးနွေးခွင့် ညှိနှိုင်းခွင့် ရှိရမယ်။ ဒါကို စွပ်စွဲတယ် လို့ ပြောလို့ မရ။ အခု အချိန်မှာ အာဏာရှင်စနစ်ကို မပြောရင် နောင် အမေစု မရှိချိန်မှာ ပြောခွင့်သာပါဦးမလား။(ဝင့်ပြုံးမြင့်)
အတ္တကင်းတယ် (ဂျစ်စူး)
ငရဲ ဆိုတာ ကြောက်ဖို့ မပြော နဲ့ ယမမင်း ကို တောင် လှောင်လာကြတာ။(မြစပဲရိုး
အရင်ဆုံး စည်းကမ်းထုတ်၊ ဥပဒေပြဌာန်း၊ သတိပေး၊ မရရင် လူလဲခိုင်းပြီး အရေးယူဘဲ။(မြစပဲရိုး)
ကျုပ်ကတော့.. အစိုးရကလုပ်ရဲမယ် မထင်ရေးးးးးချ…. မထင်..။
ဘုန်းကြီးက..သူ့ငါးခြောက်ပြားခိုးလို့.. ကြိမ်နဲ့ဆော်ခံရတဲ့မောင်လွင်လိုလူက.. ဘုရင်တက်ဖြစ်တဲ့.. တိုင်းပြည်..။(မင်းတုန်းမင်း)
အမျိုးသမီးတွေလည်း.. ဘုရားဟောအတိုင်းရဟန်းမဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်ပြောဟောသူဘုန်းကြီး..ကို.. ဖမ်းထောင်ချတဲ့တိုင်းပြည်…။
စစ်သားတွေတိုက်ရဲအောင်.. ရဲသော်မသေ..သေသော်ငရဲမလားမျိုးသဘောသက်ဝင်အောင်.. (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တောင်းဆိုချင်အရ) လူသေလူဖြစ်သဘောကို.. ဟောပြောတဲ့ဘုန်းကြီးကို.. ဓမ္မန္တရာယ်အဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့တိုင်းပြည်လေ..။ (ရှင်ဥက္ကဌ)
သူကြီး ရဲ့ လူသေလူဖြစ် ဝါဒ ကို အမြင်မတူ လို့ မမှန်ဘူး မပြောပါဘူး။
ဟိုဘက် နံရံ မှာ ဘာရှိလဲ ဘယ်သူ မှ သက်သေပြနိုင်တာမှ မဟုတ်တာလေ။
ဒါပေမဲ့ ပြောလိုတာက ဒီအယူဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူအဆ လို့ ပြောနိုင်လို့ မရရင်,၊သက်သေမပြနိုင်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ တစ်ခြား ဂိုဏ်း တစ်ခုလို အမည်ခံခွင့်မရှိပါ။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ ကံ ကံ ၏ အကျိုး နဲ့ ဘဝ ၏ သံသရာလည် ပုံ ကို ယုံကြည်ကြလို့ပါဘဲ။
လူသေလူဖြစ် ဘာသာ လို့ ကိုယ့်ဟာကကိုယ် ဘာသာ အသစ် ထူထောင်ပေါ့။
ကမ္ဘာမှာလဲ သူတို့အယူဝါဒ ယုံကြည်တာ နဲ့ ထူထောင်ထားတဲ့ ဘာသာအသစ် တွေ အများကြီး ဘဲ ကို။
သူတစ်ပါး ကို မထိခိုက်ရင်၊ လူ့အခြေခံကျင့်ဝတ် ကို အလွဲမလုပ်ရင်၊ ဥပဒေ ကို မချိုးဖောက် ရင် ရတာဘဲလေ။
သို့ပေမဲ့ ရှိပြီး ဘာသာ ကို မှီပြီး၊ အဲဒီ ဘာသာ ရဲ့ အမည်သုံးပြီး ကိုယ်ထင်ရာ အယူ ကိုပုံသွင်းခွင့်မရှိစေရပါ။
ဘာကြောင့် လဲ ဆိုတော့ နည်းပညာနဲ့ ကြည့်ရင် မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေ ကြောင့်ပေါ့။
ဒီတော့ ချိုးဖောက် ရင် သူများ ဆီ က အညွန့်ခူးစား သလိုပါဘဲ။
ဒါကတော့ Ethics ကို ပျက်စီး စေ တာပေါ့။
အတားခံ ရတာ မဆန်းပါ။
တော်ပြီ သူကြီး ရေ။
ဘယ်ကဘယ်လို.. ကျုပ်ရဲ့ လူသေလူဖြစ်ဝါဒ ရမှာလည်း…
မဟုတ် ငြင်းပေါ့ သူကြီးမင်း ရယ်။
စောဒီး လို့ ပြောမှာပါ့။
အမှန်က.. လူသေ. .ဘာဖြစ်ညာဖြစ်မငြင်းပဲ..။
.. ဘာလိုလိုညာလိုလို.. ဖြစ်သလိုလိုမဖြစ်သလိုလိုမှာ.. ငါ့ကိုဖူးမျှော်မာန်လျှော့ကန်တော့မှ..
ကဲ.. မင်းက..ကုသိုလ်တွေရသွားပြီ.. နတ်ပြည်ရောက်မယ်….
ကဲ.. မင်းက.. သိပ်လေးစားပုံမရှိ..ငရဲပြည်ဆိုပြီး.. လမ်းညွှန်နိုင်သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှ…။
ဥဂျီးတို့ …… တို့ရေ ….
တခါတလေ နောက်လာနောက်သား သားတို့ အတွက် … နီးစပ်သော အဖြေကို မှန်နိူင်သလောက် ပေါင်းစု ထားခဲ့ပေးပါလို့ …
အခု ပြသနာ က
(၁) ပြုံး က ဘာသာရေး ဆိုတာ အာဏာရှင်စနစ် ကို မွေးတယ်။
(ထို့ကြောင့် အာဏာရှင်စနစ် ပျက်ဖို့ ဘာသာရေး ကို သိပ် ဦးစားပေးပြီး အရေးတကြီး မလုပ်ရ)
(၂) သူကြီး က ထေရဝါဒ ဆိုတာ အာဏာရှင် စိတ်ကို မျိုးစေ့ချပေးတယ်။
(ထို့ကြောင့် ထေရဝါဒ ကို လူသေလူဖြစ် နဲ့ အစားထိုးကြ) – နောက်တာ ကို သူကြီး အတည်ယူရင်တော့ မသိ။
(၃) အရီး က အာဏာရှင် က သာ ဘာသာရေး ကို လက်ကိုင်ဒုတ် လုပ်ပြီး သူ စိတ်ကြိုက် လူ တွေ ကို ထိန်းချုပ်တယ်။
(ထို့ကြောင့် အာဏာရှင် ကို မြင်အောင်ကြည့် ရအောင် ဖယ်ရင် ဘာသာရေး က သူဟာသူ သာမာန် ဖြစ်သွားမယ်)
တို့တွေ အားလုံး ကိုယ့်ဟာ နဲ့ ကိုယ် ထင်ရာ ပြောနေခြင်းပါ။
မောင်ရဲစည် မှာလဲ အမြင် နောက်တစ်မျိုး ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ဘာသာရေး အကြောင်းမှာ အဖြေရှာဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့ မောင်ရဲစည်ရယ်။
ဒီလို ငြင်းခုန် တာတွေ ကို စေ့စေ့တွေးရင် အပြင်လောက မှာ အကျိုး ရှိချင်မှ ရှိပါမယ်။
ဒါပေမဲ့ ယူတတ်ရင် ငြင်းခုန်သူ တစ်ဦးချင်း စီမှာ ကိုယ် နဲ့ အမြင်မတူ လဲ မတူနိုင်ဘူး ဆိုတာ သိ နေတတ်တဲ့ စိတ်စွမ်းအင် ရသွားပါတယ်။
ဒါကတော့ အပြင်လောက မှာ အသုံးဝင်မှာပေါ့။
ပြုံး မှာ အဲဒီ အာဏာရှင် နဲ့ ပါတ်သက်လို့ သူဖတ်ထား တဲ့ စာအုပ်တွေ မနဲဘူး။
အဲဒါတွေ ကို အရီး မသိဘူး။ ဒါကြောင့် အမြင်မတူနိုင်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ ယူတတ်ရင် သူ့ဆီက ကိုယ်မသိတာ တွေ ရလာတယ်။
ဒါဟာအမြတ်ပါဘဲ။ On the top of that I love her more. :-)))
(သဘောမျှခြင်း/မမျှ ခြင်း က အရေးမကြီးပါ)
ပြီးတော့ သူ့ ကို ပြန်ငြင်းဖို့ ကိုယ်လဲ အားသန်ရာ မှီးဖို့ ဆောင်းပါးတစ်ချို့ နဲနဲ ရှာဖတ်ရတယ်။
အဲဒီကနေ ကိုယ် သိတာအပြင် သူများကိုပါ မျှနိုင်မယ်။
(မှန်တာ/မမှန်တာ အရေးမကြီးပါ၊ ကိုယ်ပြောတာ မယုံရင် မယုံသူ က ပြန်ရှာငြင်း တော့ ပိုပြီး အသိ တိုးပေါ့)
ဒီတော့ ဒီလိုဘဲ နားမလည်တာ တွေကို ပေါင်းရင်း စုရင်း နဲ့ ဘဲ ဘဝ ထဲမယ် အလုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်နေတာမဟုတ်လား မောင်ရဲစည် ရယ်။
သူကြီး ဆီက လူသေလူဖြစ်ဝါဒ ထွက်လာတာ အမြတ်ဘဲ။
သား ပြောချင်တာကလေ ….
အဲ့ဒါတွေက စံ စနစ်တခုနဲ့ သွားနေတာ လေ့လာနိူင်သူ စာများများ ဖတ်နိူင်သူက ရပ်ဖရန့် များသူက ပိုတာသွားတယ် ဒါသည်လည်း အမှန်တရားတော့ မဟုတ် …. အရီးလတ်ပြောသလို ယူကျရအောင် ဆိုသော်ခါ ….
တိန်….. ရှင်းလေ ရှုပ်လေမို့ ဘေးက ထိုင်ကြည့်တော့မယ် ….
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်လက်ရှည်စွာ ကိုးကား အကြောင်းပြန်တတ်တာ အရီးလတ်မို့ အါ့ကြောင့် ချစ်တာ …….
အါ့မို့လည်း ကျနော်နဲ့ မတည့်တာ အဟီ <3
Whatever the BLUEs won. :-))))
မကြည်စင်လေး ကို သနား
စိန်ကြက်ဆင် နဲ့ မတည့်တာပါ။
မောင်ရဲစည် နဲ့ တည့်ပါတယ်။
အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလောက် ပူလောင်အိုက်စပ်နေတဲ့ ရာသီဥတုထဲ မိန်းမတွေကို စောင်မည်းကြီး ခေါင်းမြီးခြုံထားနိုင်အောင် ဘာသာရေးက စွမ်းပြီဆိုမှတော့ အဲဒီ တိုင်းပြည်တွေကို အုပ်ချုပ်စရာ အာဏာရှင်ကို မလိုအပ်ဘူး။ သူ့အလိုလို ဖြစ်တည်ပြီးသား။
အာဏာရှင်ဆိုတာ အာဏာရှင်ဖြစ်ဘို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့ယင် ဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုပေါ်ပေါက်နိုင်ပါတယ်
ဘာသာမဲ့တွေထဲမှာလဲ အာဏာရှင်ဖြစ်ဘို့အခွင့်အရေးရလာယင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ကိုယ်လိုရာဆွဲတွေးယင်
တကယ်က အာဏာရှင်မဖြစ်အောင် ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေရေးဆွဲပြီး အဲ့ဒီဥပဒေအောက်မှာအားလုံး
လိုက်နာကြဘို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်..ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စိတ်ရင်းအမှန်က အဲ့ဒီဥပဒေ အမြန်ပေါ်ပေါက်စေချင်တယ် သူမရှိတဲ့နောက် အဲ့ဒီဥပဒေကထိန်းကြောင်းသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပုံပါ …..
ကျုပ်လိုကောင်များရေးမိရင် ဆဲပြပါလိမ့်မယ် ပရိတ်သပ်က
ရော ဘကြီးရယ် ခက်ပါဘိ။ အောက်မှာ နီကိုလေး ဖြေပေးထားသလိုပဲ။ အဲဒါ အဖြေလို့ ယုံတယ်။
( HIV ပိုးဟာ သူ့ရဲ့မျိုးဗီဇ(gene/RNA)ကို သွေးဖြူ ဥရဲ့ မျိုးဗီဇ(gene/DNA)ထဲမှာ မြှုပ်နှံလိုက်သလိုပါပဲ ။ လက်ခံကောင် သွေးဖြူ ဥရှိနေသ၍ HIV ပိုးတွေဆက်ထွက်နေဦးမှာပါ)
စာရေးဆရာမ ဆိုတော့ မိုက်လို့ ဘာသာရေးသွားထိတဲ့စာတွေ ရေးတာပါ။ လိမ်မာရင် ကိုယ့်နာမည် ကိုယ် ဘယ်အထိခံမလဲ။ ဒီလိုစာတွေ ဘယ်ရေးမလဲ။ ဒီထဲမှာ နာမည်ကြီးအောင် ထက် ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကို ရိုးရိုးသားသား ဖွင့်ချတာပါ။
(ဘာသာရေး)ကိုးကွယ်မှုဟာ အကြောက်တရားက ပေါက်ဖွားပါတယ်
(အုပ်ချုပ်သူ) အာဏာရှင်ဟာ သဘာဝစိတ်(အတ္တ)က ပေါက်ဖွားပါတယ်
အာဏာတည်မြဲဖို့ အကြောက်တရား လိုအပ်ပါတယ်(မော်တောင်မကြည့်ဝံ့သည်အထိ)
ရှေးဦးအာဏာရှင်တွေဟာ ကိုးကွယ်မှုရဲ့အာနိသင်ကို သိရှိပြီး အသုံးချခဲ့ပါတယ်
အဲလောက်နဲ့ မရပ်ပဲ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး အာဏာရှင် ဗီဇကို ဘာသာရေးထဲမှာ မြှုပ်နှံခဲ့ပါတယ်
HIV ပိုးဟာ သူ့ရဲ့မျိုးဗီဇ(gene/RNA)ကို သွေးဖြူ ဥရဲ့ မျိုးဗီဇ(gene/DNA)ထဲမှာ မြှုပ်နှံလိုက်သလိုပါပဲ ။ လက်ခံကောင် သွေးဖြူ ဥရှိနေသ၍ HIV ပိုးတွေဆက်ထွက်နေဦးမှာပါ
ဘာသာမဲ့တစ်ယောက်က ပြောတာကို တစ်ဆင့်ပြန်ကြားခဲ့တာလေး သဘောကျလို့ . . .
ဘာသာတရားဆိုတာ ethic ပဲတဲ့ . . . ငါတ်ို့မှာ ethic ရှိနေရင် ဘယ်ဘာသာကိုမှ ကိုးကွယ်စရာမလိုဘူး တဲ့ . . . ငါတ်ုိ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အားမကိုးဘူး . . . ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ အားကိုးတယ်တဲ့ . . .
ကိုယ်လည်း ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် . . . အဲဒါ ဘုရားဟောတဲ့ အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော လို့ . . .
(အဲဒါ ဘုရားဟောမှန်း ဘာနဲ့သက်သေပြမလဲလို့ လာမမေးနဲ့နော်)
ဆိုတော့.. အဲဒါကို ဘုရားဟောလို့ယုံကြည်ရင်.. လက်တွေကျင့်သုံးလိုက်နာကြည့်…။
ဘယ်သူ့ကိုမှ.. ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှ.. ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမျှော်မာန်လျှော့ကန်တော့မနေနဲ့..။